Mbido AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ German Kai Havertz Child Akụkọ Plus na-enweghị isi akụkọ eziokwu
Anyị Kai Havertz Biography na-agwa gị Eziokwu gbasara Akụkọ nwata ya, Ndụ mbido, ndị nne na nna, ezinụlọ, enyi nwanyị / nwunye ka ọ bụrụ, Ndụ, Net Worth na Ndụ Nke Onwe.
Na nkenke, nke a bụ Life Life of Kai. Lifebogger malitere site na nwata, rue mgbe ọ ghọrọ onye ama ama.
Iji mee ka agụụ ịgụ akụkọ onwe gị sie ike, nke a bụ oge ọ bụ nwata rue ụlọ okenye - nchịkọta zuru oke nke Kai Havertz's Bio.
Akụkọ ndụ nke Kai Havertz - Site na ụbọchị nwata ya ruo n'oge ama ama.
Ee, gị na m maara na ọ bụ nkà na ụzụ - onye ọkpụkpọ zuru oke nke nwere obi ụtọ na bọl na ụkwụ ọ bụla echefughị ​​ikike ikuku.
Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole hụrụ ọhụụ zuru oke nke Kai Havertz - nke anyị kwadebere. Ugbu a na-ebutụbeghị mbụ, ka anyị bido na akụkọ mmalite oge nwata ya.
Kai Havertz Nwatakiri Akụkọ nke:
Maka Biography Starters, German na-aza aha 'Alleskönner' nke pụtara 'Jack nke ahịa niile'.
Kai Havertz a mụrụ na 11th ụbọchị nke June 1999 nne ya, onye ọka iwu na nna, onye uwe ojii, n'obodo Aachen, Germany. A mụrụ ya dị ka nwa nke atọ na nwa nke abụọ nke njikọ dị n'etiti nne na nna ya.
Kai Havertz toro na ụmụnne ya, nwanne nwanyị aha ya bụ Leah na nwanne nwoke aha ya bụ Jan.
Dịka nwa ikpeazụ a mụrụ na ezinụlọ Havertz, ejiri nlekọta zuru oke lekọta Kai anya. Ọzọkwa, mmekọrịta ezinụlọ nke siri ike dị n'etiti ezinụlọ ọ bụla.
N'agbanyeghị ọrụ siri ike nke ndị nne na nna Kai Havertz (Iwu na Iwu), bọọlụ abụwo njikọta njikọta n'etiti ndị ezinụlọ ya. Anyị ga-amụnyekwu ìhè na nke a n'akụkụ nke bio anyị.
Kai Havertz Ezinụlọ:
Nke mbu, o sitere na ulo ndi nkiti di nma. N'oge gara aga, onye na - arụ ọrụ dị ka onye ọka iwu na Germany ga - enweta ihe ruru € 86,040 kwa afọ (Nkwupụta ụgwọ ọnwa-Explorer). Nke a bụ atụmatụ nke ego nne nne Kai Havertz na-akpata.
N'aka nke ọzọ (ya na nna ya), ụgwọ ọnwa otu onye uwe ojii German bụ € 32,500 (Pay-n'ọtụtụ akụkọ).
Site na stats ndị a, ị ga-ekwenyere m na ndị nne na nna Kai Havertz, obi abụọ adịghị ya, na-arụ ọrụ anyị na-ezo aka dị ka ụlọ klaasị dị mma.
Obodo German nke agbụrụ ọcha sitere na obodo nta nke Mariadorf, nke dị n'ebe ugwu Aachen.
Ọ bụrụ na ị maghị, Aachen bụ obodo ọdịda anyanwụ Germany, nke dị nso na ala Belgium na Netherlands.
Ihe onye ọ bụla agwabeghị gị banyere ebe obibi Kai, Aachen:
Ị maara?... Obodo ahụ bụ nke otu n'ime agha obodo kachasị ukwuu n'ụwa nke a na-akpọkarị 'Agha Aachen'.
N'oge Agha IIwa nke Abụọ, US meriri ndị agha German na obodo ahụ, na-eme ya obodo mbụ na ala German nke enwetara. Nke ahụ ezuola n’akụkọ ihe mere eme!
Etu bọọlụ bidoro maka Kai Havertz:
Site na mmalite, Polish na Iwu abụghị naanị ọrụ dịịrị ezinụlọ ya. Ndị nne na nna Kai Havertz nwekwara otu onye pụrụ iche n'ụlọ ha (Kai's Granddad, Richard) bụ onye na-elekọta ọtụtụ ụlọ nke ụlọ- Kai.
Nna nna Richard bụbu onye egwuregwu bọọlụ na onye nchịkwa mere ka ezinụlọ dum nwee mmasị na egwuregwu ahụ.
You maara?… Ọ bụghị naanị nna nna ya Richard, ọbụnadị nna Kai Havertz na-etinye aka na football (ọkwa onye na-amu amu).
N'ezie, ihe omume ndị na-abụghị nke ịgba bọọlụ emeghị ka ọ dọpụ uche dị ukwuu n'ihi na onye ọ bụla nọ na ezinụlọ Havertz na-agba bọọlụ.
Kai Havertz Mmụta:
N'ịbụ onye ọrụ mmanye iwu na-arụ ọrụ oge, nna Kai hapụrụ ọtụtụ nna ya, Richard.
Mgbe oge ruru, nna nna Richard gosipụtara nwa nwa ya na egwuregwu ahụ mara mma.
Na mgbakwunye, inwe ezinụlọ nso gaa n'egwuregwu bọọlụ nke ndị otu mpaghara jiri nyere aka mee ka agụụ Kai nwee maka bọọlụ.
Nke a bụ ihe German ahụ kwuru otu oge banyere nna nna ya, papa m na nwanne ya nwoke nke nyeere ya aka n'ịhụ egwuregwu ahụ n'anya.
"Nna m ochie mere ka m banye n'egwuregwu bọọlụ," Havertz gwara bundesliga.com otu oge. Ọ gara n'ihu…
O nyeere m aka iwere nzọụkwụ mbụ m. N'ụzọ doro anya, papa m na nwanne m nwoke gbalịsiri ike ka m pụọ ebe ahụ na-egwu egwu mgbe m dị obere.
N'ime ezinụlọ m, Onye ọ bụla bụ onye nzuzu bọọlụ, anyị bụ naanị ezinụlọ ịgba bọọlụ.
Anyị hụrụ football n'anya na ihe niile gbara ya gburugburu. Etoro m n’egwuregwu ahụ, ọ bụkwa otú ahụ ka agụụ a si malite. ”
N'ime obere obodo Mariadorf, Havertz na-eto eto ga-ebugharị kwa ụbọchị 100 site na ezinụlọ ya ịga bọọlụ n'okpuru nduzi Granddad. Mgbe ụfọdụ ha abụọ na-emega ụlọ ma ọ bụ n'ogige ezinụlọ ha.
N'oge ụfọdụ, ọ bụ ihe okike ka Havertz dị afọ 4 malite igwu egwu maka ndị otu ya, Alemannia Mariadorf mgbe ọ ghọtara egwuregwu ahụ-niile ekele nye nna nna ya nke mere ka ọ bụrụ ihe dị mkpa, na Kai tolitere wee bụrụ onye egwuregwu bọọlụ .
Ikekwe ị maghị… nna nna Kai, Richard Havertz, bụ onye isi oche ogologo oge na klọb ndị ntorobịa - Alemannia Mariadorf.
Ọbụna ndị maara ya ekwuola na ọ nyefere nwa ya onyinye nke egwuregwu ahụ. Ebe ọ bụ na Kai dị mma, ọ gara nọrọ n'ọgbọ dị afọ abụọ karịa ya.
Kai Havertz Biography - tozọ Na-ewu ewu Akụkọ:
Ka ọ na-erule oge Havertz dị afọ itoolu, ndị ezinụlọ ya malitere usoro nke ịkpọtụrụ ndị otu egwuregwu bọọlụ ebe ọ ga-enwe ike ịsọ asọmpi, ọkachasị na klọb ndị ntorobịa na-abụghị nkasi obi nke ụlọ ya na klọb nna ya.
N'afọ 2009 - 10 dị afọ - sonyeere Alemannia Aachen, klọb kasịnụ na mpaghara ya.
Onye na-eto eto ahụ nọrọ naanị otu afọ na Aachen, ọ bụ ezie na ọ bụghị n'ihi na ọ toghị oke, mana n'ihi na o gosipụtara na ọ dị oke mma karịa ọkwa klọb ahụ.
N'oge ọ malitere inyere klọb aka ịnakọta akara, football Scouts bidoro iji Kai kpọrọ ihe.
The Bayer 04 Leverkusen Akara Aka:
Mgbe ọ ka nọ na Alemannia Aachen, Kai nwere arụmọrụ megide Leverkusen, ihe ngosi nke gbanwere ọdịnihu ya.
Dị ka a tụrụ anya ya, ọ bụ nwoke egwuregwu. Onye nkuzi ntorobịa nke onye iro ya, Slawomir Czarniecki, hụrụ onwe ya ka ọ na-ebute nnyefe maka Kai.
Kai (onye dị obere karịa ndị otu ya) na-egwu egwu maka Alemannia Aachen n'okpuru-12s megide Leverkusen's n'okpuru-12s.
Mgbe o mechara ihe mgbaru ọsọ 3 na mbibi 8-3, Slawomir Czarniecki, onye ntorobịa ntorobịa na Bay-Arena mere ihe niile kwere omume maka Leverkusen ịbanye ya.
Kai Havertz Biography - Akụkọ Successga nke Ọma:
Mgbe ọ dị afọ 11, Kai hụrụ onwe ya ka ọ bụrụ onye ọkpụkpọ Bayer 04 Leverkusen. Site na ụbọchị mbụ ya, ọ malitere ime akara site na klọb - na-egosipụta nkà kachasị elu na ikike a na-enweghị atụ.
Mgbalị ya nwetara ya aha otutu 'Alleskönner' nke pụtara 'Jack nke ahịa niile' na n'oge ahụ, ọ dị mkpụmkpụ.
Na-eto eto agwakọtara na aha ọma:
Na mbido n'ime ọrụ Bayer 04 Leverkusen nke Bayer, onye ọkpụkpọ ụkwụ aka ekpe meriri ihe mgbochi ọ bụla n'ụzọ ya belụsọ otu ihe - ahụ ya - nke mere ka ndụ siere ya ike.
The Kai bịara site na ịta ahụ na nsogbu nke ịhụ ụzọ karịsịa ụkwụ ya na-eto ogologo na ngwa ngwa. Onye nwere onyinye amara ya na nke ahụ nyeere klọb aka inweta mmeri German U17 na 2016 (goolu 18 na egwuregwu 26).
Ọnwa itoolu mgbe mmeri ahụ gasịrị, Kai malitere igwu egwuregwu mbụ na onye òtù ọlụlụ ya na mpụ Julian Brandt. N'egwuregwu mbụ ya, ọ juru ndị otu egwuregwu Kai anya - ịhụ na ha nwere obere onyinye n'ihu anya ha.
Na 19, o nyere aka ịkwanye Bayer Leverkusen na Champions League na na 21, ọ ghọrọ ezigbo onye ndu-yiri ogwe aka nke onye isi.
N'oge edere Kai Havertz's Bio, ọ ka ghọrọ Frank Lampard si Chelsea ịbanye nke isii mgbe emechara Timo Werner, Hakim Ziyech, Ben Chilwell, Thiago Silva na Malang Sarr.
Obi abụọ adịghị ya, ndị na-akwado Chelsea n'oge na-adịghị anya ga-ahụ ya ka ọ gosipụta talent ya na mbara igwe. Ndị ọzọ, dị ka anyị na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Kai Havertz Ndụ Ndụ - Enyi, Nwunye, Nwa?
Enwere okwu na n'azụ nwoke na-aga nke ọma, ọ dị nwanyị mgbe niile. N'okwu Kai Havertz, e nwere WAG mara mma nke ga-abụ nwunye ya n'oge na-adịghị anya.
N'ebe a, anyị ga-ewetara gị akụkọ gbasara akụkọ gbasara nwoke na nwanyị na ọnọdụ mmekọrịta dị ugbu a.
Banyere enyi nwanyị Kai Havertz:
Iji malite, nwa okorobịa German amaghị na ọ nwere nwanyị ọ bụla na ndụ ya tupu ya ezute enyi ya nwanyị mara mma nke aha ya bụ Sophia.
Kai zutere ma hụ nwa agbọghọ a n'anya n'oge ọ dị afọ iri na anọ na Bayer 04 Leverkusen. Ma ndị hụrụ ha n'anya na-egbu ọtụtụ dị ka ezigbo egwuregwu ma ọ dị ka ha nwere ike ibute mmekọrịta ha na ọkwa ọzọ. Nke a pụtara n'ụzọ nkịtị; O nwere ike ịbụ na Sofia bụ nwunye Kai Havertz.
Ugbu a, ka m na-ede Bio nke a, lovebirds enweghị nwa nwoke ma ọ bụ nwa nwanyị na-alụghị di. Mana ikpe ikpe site n'ụzọ ha na-arapara n'otu n'otu, o doro anya na ịkpọrọ enyi ya nwanyị gaa ngbanwe maka agbamakwụkwọ ga-abụ nzọụkwụ ọzọ nke Kai.
Kedu ihe na-eme Kai Havertz akara? Nọdụ ala ka anyị na-ewetara gị ịme nke ụdị onye ọ bụ iji nyere gị aka ịmata onye ọ bụ nke ọma.
Iji malite, onye Havertz bụ ngwakọta nke àgwà Gemini zodiac na ịhụnanya ya maka ụmụ anụmanụ anọghị n'ụwa a.
Otu okwu na-aga, na enwere obere ma ọ bụ iguzosi ike n'ihe n'egwuregwu football nke oge a. Otú ọ dị, nke a adịghị echebara nnọchi anya nke Kai na nkịta ya nke yiri ka ọ bụ ezigbo enyi ya.
Ya na ya na-aga ebe niile, ndị na-akwado Chelsea na-enwekwa obi ụtọ ịhụ ka ọ na-abịa London.
Kai Havertz Webzọ ndụ:
Nyocha nke ụgwọ ọnwa ya na usoro mmefu ya na-egosi na Kai na-ebi ndu ndụ dịka aka ya. Ihe akaebe nke ụdị ndụ a na-egosipụta ụlọ ya, nchịkọta ụgbọala na ike iji oge ezumike na ebe pụrụ iche.
Hagbọ Kai Havertz:
E wezụga ịhụ ya ka ọ na-agba bọl, The Chelsea Star na-anya Mercedes-Benz G-Klas, mgbe ụfọdụ a na-akpọ G-Wagen.
You maara? Ndị nrụpụta ụgbọ ala nwere isi ụlọ ọrụ ha na Stuggart, nke bụ obodo ọmụmụ Timo Werner.
Kai Havertz Ndụ Ezinụlọ:
Ọtụtụ mgbe, nrụgide na-akwụsị n'oge ikpeazụ a na-amụ banyere imezu atụmanya ndị dị elu nke ndị mụrụ ha.
N'ịbụ onye etinyela Kai n'aka nna nna ya emeela ka ọ nwee ihe ịga nke ọma n'ụzọ nke ya. Na ngalaba a, anyị na-agwa gị ihe ndị ọzọ gbasara nne na nna Kai Havertz na ndị ezinụlọ ya ndị ọzọ.
Banyere Nna Havertz:
Onye isi ezinụlọ ahụ bụụrụ bọọlụ na ọkwa onye na-amu amu tupu ọ gbanwee ọrụ, ka ọ bụrụ onye uwe ojii.
Ikwanye akpụkpọ ụkwụ ya n'oge na-adịghị anya abụghị ihe ọ chọrọ taa, ọ na-enwe obi ụtọ ịhụ nwa ikpeazụ ọ mụrụ na-ebi nrọ ya.
Ọ na nna ya nwere mmekọrịta chiri anya nke ọ na-akwụ ụgwọ maka ịkwado nkwado dị ukwuu ma nyere aka na ọganiihu ya na football.
Banyere mama Ha Havertz:
Dịka onye ọka iwu German, anyị nwere ike ịhụ Kai ịnweta ndụmọdụ kachasị mma n'akụkụ iwu. Kai kwadoro nne ya na onye ọka iwu maka ịdọ ya aka ná ntị mgbe niile ka ọ dị umeala n'obi ma lekwasị anya na agụmakwụkwọ ya.
Na mbido, nne nke atọ hụrụ na Kai nwere afọ ojuju ihe ndị achọrọ maka ya iji mezue diplọma nke ụlọ akwụkwọ sekọndrị- nke o mere na 2018.
N'ihi ya, nwa okorobịa German jiri oge dị mkpa pụọ ​​n'ọhịa ka ọ gụsịrị ụlọ akwụkwọ sekọndrị iji mee nne ya obi ụtọ. N'ịtụle oge a ka ọ bụrụ oge kachasị sie ike nke ọrụ ya, German kwuru otu oge;
“Nnwale ule nke ụlọ akwụkwọ sekọndrị bịara n'otu oge ahụ dị ka igwu egwu na German DFB Cup. Enwere m ule na Wednesday mgbe m gachara egwuregwu na mgbede Tuesday.
Egwuregwu ahụ gara oge na ntaramahụhụ. Laghachi ụlọ n’oge na-adịghị anya, achọpụtara m na e nwere ule n’echi ya. Achọghị m ka m kwuo maka etu ule a siri gaa ”
Banyere ụmụnne nwanne Kai Havertz:
Onye na-agba bọọlụ nwere nwanne nwoke na nwanne nwanyị nke na-ele anya nke ukwuu karịa ya. Foto dị n'okpuru ebe a, nwanne Kai Havertz Jan yiri ka ọ bụ ọkpara ezinụlọ.
Leah Havertz, n'aka nke ọzọ, yiri ka ọ bụ nanị nwanne nwanyị nke ndị na-agba bọl.
Enweghị obi abụọ ọ bụla, Kai na nwanne ya nwoke na nwanne ya nwanyị nwere mmekọrịta chiri anya.
Banyere ndị ikwu Ha Havertz:
N'ebe ezinaụlọ Havertz nọ, nke kacha ewu ewu bụ nna nna ya aha ya bụ Richard Havertz. Obere akwụkwọ e nwere gbasara nwanne nna ya, nwanne nna ya na nne na nna ochie ndị ọzọ.
Kai Havertz Eziokwu Eziokwu:
Iji chịkọta ihe ndekọ anyị, ebe a bụ eziokwu amachaghị ma ọ bụ nke a na-akọghị nke ị na-ahụkarị na Bio ya.
Eziokwu nke 1: Nkwụ ụgwọ ụgwọ ụgwọ na ego nke Chelsea n'otu sekọnd:
Kwa Afọ £ 7,291,200
kwa ọnwa £ 607,600
Kwa Izu £ 140,000
Kwa .bọchị £ 20,000
Kwa elekere £ 833
Kwa Nkeji £ 13.8
Sekọnd £ 0.23
Onye ọ bụla nọ na UK ga-arụ ọrụ maka afọ 19 na ọnwa 11 iji nweta ihe Kai na-ewe n'ụlọ kwa ọnwa maka Chelsea FC. Chọta n'okpuru, ụgwọ ọrụ ya ka elekere na-akụ.
Nke a bụ ihe Kai Havertz akwụla ụgwọ kemgbe ịmalitere ile Bio.
Eziokwu nke 2: Mmemme FIFA:
Dị ka Marc-Andre ste Stegen na Thomas Muller, A na-edozi àgwà nke Havertz na FIFA. Obi abụọ adịghị ya, ọ bụ otu n'ime ndị ntorobịa kachasị mma ịbanye na Ọnọdụ Ọrụ.
Eziokwu nke 3: Forhụnanya maka Piano:
Apụ na football, Havertz na-etinye onwe ya n'ọrụ n'ịkpọ ngwá ọrụ, nke o kwenyere na ọ dị mma maka ụbụrụ ya na ọgụgụ isi ya.
Eziokwu nke 4: Kai Kavertz Okpukpe:
Dị ka ọtụtụ ụmụaka sitere na Archen, nne na nna Kai Havertz zụlitere ya na nrube isi n'ozizi okpukpe nke Ndị Kraịst. Ị maara?... aha etiti ya bụ 'Lukas' nwere mpụtara Akwụkwọ Nsọ, nke pụtara 'Ọcha' ma ọ bụ 'ọcha'.
N'ezie, ọrụ nna nna Richard bụ ịhụ na ịzụ ụmụ ụmụ ya anya. Dika nwatakiri, obere Kai ritere uru na ya taa, anyi nwere obi uto.
Iji kwuo eziokwu, akụkọ ndụ nke Kai Havertz na-akụziri anyị na ịrụsi ọrụ ike na nkwụsi ike na-akwụ ụgwọ.
Àgwà a, anyị kwenyere, sitere n'aka nne na nna ya. N'ịbụ onye nọrọ oge a na anyị, jiri obiọma gwa anyị ihe ị chere banyere Bio nke German Footballer na ngalaba nkọwa.